Ra’isul Wasaaraha Magacaaban oo codsi u diray Xildhibaanada Golaha Shacabka | Somalia News
Waxaa soo baxaya faahfaahino ku saabsan qarax Bambaano oo caawa fiidkii ah ka dhacay degmada Xamar-weyne ee magaalada Muqdisho, kaasoo daryankiisa laga maqlay meelo badan. Sida wararku nagu soo gaarayaan qaraxa yimid ka dib markii nin hubeysan oo bam gacmeed ku tuuray xarunta saldhiga Booliska degmada Xamar-weyne oo ku dhex yaalla suuqa degmadaas. Khal khal ayaa ka dhacay suuqa qaraxaasi ka dib, waxaana deg deg loo xiray inta badan goobaha ganacsiga, iyadoo ciidamada ku sugnaa saldhigaas ay fureen rasaas aan sidaa u badneyn. Saraakiisha Booliska Somalia ayaa sheegay in ciidamo ku sugnaa agagaarka saldhiga Xamar-weyne ay gacanta ku dhigeen ninkii tuuray bamkaas, xili uu isku dayayey inuu cararo. “Ninkii bamka tuuray gacanta ayaa lagu dhigay, waxaana lagu hayaa xabsiga, laamaha amniga ayaana su’aalo weydiinaya, bamka uu tuurayna ma jiro wax khasaare ah oo ka dhashay ama dad wax ku noqday” ayuu yiri taliyaha Booliska degmada Xamar-weyne oo la hadlay warbaahinta. Xafiiska Shabakada Allbanaadir.comMuqdisho [email protected]com - Advertisement -
Ra’isul Wasaaraha Magacaaban oo codsi u diray Xildhibaanada Golaha Shacabka
Ra’iisul Wasaaraha magacaaban ee aan weli helin codka kalsoonida Xildhibaanada Golaha Shacabka Eng. Maxamed Xuseen Rooble, ayaa xalay kulan la qaatay Gudoonka Golaha Shacabka .
Maxamed Xuseen Rooble ayaana ka codsaday Gudoonka golaha shacabka in ay ka caawiyaan sidii uu u heli lahaa codka kalsoonida golaha shacabka si Xukuumadiisa shaqo badan u qabato mudada yar ee u harsan.
Waxa uu sidoo kale Ra’isul Wasaaraha magacaaban ka codsaday Xildhibaanada golaha shacabka in codka kalsoonida siiyaan, waxa uuna xusay in uu rajeenayo in Xildhibaanada siin doonaan codka kalsoonida.
”Waxaa farxad ii ah in aan idinla wadaago, in aan si sharaf iyo dareen masuuliyadeed leh aan u aqbalay kalsoonida uu isiiyey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iiguna magacaabay Xilka Ra’iisul Wasaaranimo ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, sidaas daraadeed, waxaan doonayaa in aan codka kalsoonida waydiisto Golaha Shacabka, aniga oo rajaynaya in ay isiin doonaan codka kalsoonida, si aan u guto waajibaadkayga.” ayuu yiri R/Wasaare Rooble.
Ra”isul Wasaaraha magacaaban ayaa la filayaa in maalinta Isniinta ah la horgeeyo Xildhibaanada golaha shacabka si codka kalsoonida u siiyaan ama ugu diidaan, waxaana socda dadaalo Madaxtooyada ku raadinayo in Xildhibaanada kalsoonida ku siiyaan Rooble.
The post Ra’isul Wasaaraha Magacaaban oo codsi u diray Xildhibaanada Golaha Shacabka appeared first on Allbanaadir.com.
This post first appeared on Allbanaadir.com. Read the https://www.allbanaadir.org/?p=165407original article
Previous articleBishaaro Muhiim ah oo loo hayo Qurbajoogta Soomaaliyeed meel kasta ay Dunida ka joogaan